२-यूसुफ, उनका दाजुहरूको घृणाको पात्र – Word of Truth, Nepal
परिवारमा यूसुफले विशेष ध्यान र स्थान पाएको कारण यूसुफका दाजुहरूलाई ज्यादै डाहा भयो। यूसुफको लामो, सुन्दर लबेदा देख्दा, “हाम्रो पनि त्यस्तै भए हुन्थ्यो” भन्ने लाग्थ्यो। उनीहरू समान अधिकार चाहन्थे र उनीहरूको डाहा (३७:११) यति तीतो भयो कि यूसुफलाई उसको सुन्दर लबेदामा देख्दा तिनीसित ____________ _____________ कुरा गर्न सक्दैनथे (३७:४)। अर्थात् तिनीहरू ऊसँग सन्चो-बिसन्चो सोध्न समेत सक्दैनथे नता “तिमीलाई शान्ति होस्” भनेर सट्टापट्टा गरिने अभिवादन नै व्यक्त गर्न सक्थे। के तपाईं कहिल्यै कसैप्रति यति साह्रो घृणा वा तीतोपनाले भरिनुभएको छ कि तपाईंले त्यो व्यक्तिसँग कुरै गर्न सक्नुभएन वा “नमस्ते” वा “जय मसीह” सम्म भन्न सक्नुभएन? डाहाको पापले यूसुफका दाजुहरूले कुनचाहिँ जघन्य अपराध गरे (प्रेरित ७:९)? ___________________________________________ _______________________________
जब पापलाई परमेश्वरको उपाय अनुसार समाधान गरिंदैन, त्यसले अझै अरू पापमा पुर्‍याउँछ! पापले त पापलाई नै जन्माउँछ! एउटा पापले अर्को पापमा डोर्‍याउँछ अनि त्यसले फेरि अर्को पापमा डोर्‍याउँछ। पापमाथि पाप थप्दा-थप्दा यूसुफका दाजुहरू पापमा यति गहिरो गरी डुबे − उनीहरू वास्तवमा यूसुफको खाडलभन्दा नराम्रो खाडलमा पर्न गए! उनीहरू पापमा झन-झन् गिर्दै गएको बयान उत्पत्ति ३७ मा अब हेरौं। उत्पत्ति ३७ अध्यायमा ठिक-ठिक पद भेट्टाउनुहोस् र “पद” स्तम्भमनि लेख्नुहोस्।
त्यो खाडल पानी जम्मा पारेर राख्ने एउटा ठूलो इनार जस्तै थियो। त्यस्तो खाडल पानी नछिर्ने माटो (कालीमाटी) वा चट्टानमा खनेर बनाइन्थ्यो। वर्षात-याममा पानी जम्मा गर्नको निम्ति बनाइएको त्यस्तो खाडलमा पानी नपर्ने समयमा पनि पानी हुन्थ्यो। यस्ता खाडलहरू ज्यादै गहिरो हुनसक्थे − १०० फीट सम्म पनि। ठूला-ठूला खाडलहरू कतिपय घैंटो वा बोत्तल जस्तो आकारमा खनिएका हुन्थे, जसको कारण मानिसहरूले तिनीहरूलाई झ्यालखानाको रूपमा पनि प्रयोग गर्थे (जकरिया ९:११; यर्मिया ३८:६-१३)। उत्पत्ति ३७ को खाडलमा भने पानी थिएन (३७:२४) तर त्यो खाडल यूसुफलाई थुन्न प्रयोग गरियो (टिप्पणी: दोतानको अर्थ “दुई इनार” हो भन्ने अनुमान छ। यूसुफले एउटा इनारलाई राम्ररी चिने)।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 19:33:422020-04-28 14:16:51२-यूसुफ, उनका दाजुहरूको घृणाको पात्र
पृष्ठभूमियूसुफ − मिस्रमा एक दास